Kushandiswa kweanomatadium mumachira anoshanda kupedzisa - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Nanomatadium zvinhu zvakagadzirwa nehukuru hwazvo zvasvika nanososale uye zvadzo zvachinja. Iko kushandurwa kwehukuru hweanomatadium kunovaita ivo vane iwo maitiro epadenga, diki hombe maitiro uye quantum saizi maitiro. Textile inoshanda yekupedzisa ndiyo nzira inogona kugutsa iyo yakakosha basa remucheka mukugadzira uye nehupenyu uye kuwedzera kukosha kwayo. Chazove chimwe chemagariro ekuvandudza indasitiri yemachira kugadzirira machira anoshanda aine kamwe chete kana kuwanda zvinhu zvakaita se antibacterial, anti-ultraviolet, Anti-kunofambira mberi, nokuzvidzora kuchenesa, inorwisa uye inorwisa-kupukuta, nezvimwewo.
Ultraviolet kuramba kupera
Anti-ultraviolet ichipedza ndeye kubata iyo nano zvinhu kune ficha pamusoro uye kuita kuti iwedzere yakarongedzwa pane machira.. Kana mwenje uchidiridza machira, iyo quantum size athari uye mamiriro emhedzisiro yeanoparticles anoita kuti mazhinji emakona e-Ultraviolet ayitirwe kana kuratidzwa, nekudaro kuderedza kuwanda kweiyo radiation ye Ultraviolet kumucheka. parizvino, TiO2, ZnO, Al2O3, SiO2 nemamwe nanoparticles anonyanya kushandiswa mune zvemachira anti-UV kupedzisa.
Pane nheyo mbiri huru dzekuzvishongedza zvemachira uye kupedza: superhydrophobic uye Photocatalytic. Nheyo ye superhydrophobic yekuzvishambidza inogona kutsanangurwa neyemukati kubata Angle, yakakura yekuonana naAngle, zvirinani kuwanikwa kwemvura, uye kiyi yekuwedzera kubatana kweAngle ndeyekuvandudza iyo-micro-rnessness yemucheka wepasi kana kuderedza simba rayo repasi.
Photocatalytic kuzvishambidza pachako kunonyanya kubva pane ye Photocatalytic reaction yeNano TiO2. Mune mamiriro echiedza, TiO2 inogona kupinda mune yakasimba REDOX reaction uye inogadzira hydroxyl yemahara radicals, iyo inogona kuora organic zvinhu. Kuenzaniswa ne superhydrophobic yekupedzisa kupedzisa, Photocatalytic pamusoro kupedzisa inogona kuomesa iyo oxidation yezvinosvibisa chete pasi pekutsamwa kwemwenje, uye zvigadzirwa zvinoshatisa ndezvekudyidzana nharaunda uye kusvibiswa-zvakasununguka. Iko hakuna kurasikirwa kwesimba mune inoitika maitiro, saka tekinoroji inoshamwaridzana ine zvimwe zvakanakira.
Iko kuwanda kwehuwandu hwemhedzisiro yeanometer antibacterial zvinhu zvinogona kuita kuti vatore kutora mapikicha kana kuburitsa yavo yemagetsi shanduko, zvichikonzera iyo shanduko yemasimba masimba, kuwedzerwa kwekudzora uye oxidation, uye kugadzirwa kwenhamba huru yeanoshanda hydroxyl radicals uye okisijeni radicals iyo inogona kuuraya mabhakitiriya munguva pfupi. parizvino, TiO2, ZnO, Ag uye mamwe maanomatadium ave achishandiswa mukupedza antibacterial micheka.
Iyo nanometer zvinhu zvinogumisa kupedzisa kwemucheka zvinoita kuti iyo yekuchaira iite nekukurumidza nekupfuura kuburikidza neiyo ficha, kuitira kuti mucheka ugone kuita mhedzisiro ye antistatic. parizvino, nano zvigadzirwa mumicheka antistatic kupedzisa inonyanya kusanganisira TiO2, ZnO, Ag, graphene, nezvimwewo.
Zvakajairika conductor nanomatadium zvine matambudziko mazhinji kana uchishandiswa wega: simbi dzinokosha dzine dzakanaka dzinogutsa asi mutengo wakakwira; Carbonbon zvinhu zviri nyore kuisa, isina kusimba simba rinoshanda nemachira uye ine rima makara. saka, dzakasiyana-siyana dzinoyevedza nanomatategia kazhinji dzinosanganisirwa kugadzirira izvo zvadzo kukanganisa kuburikidza ne synergistic mhedzisiro yezvinhu kuitira kuti zviwane kuguma kupedzisa mhedzisiro..
Mumamiriro ezvinhu akajairwa, iyo yemukati yemucheka yakaiswa nekuda kwekushayikwa kwemahara emagetsi emagetsi, kupa iyo machira emagetsi conductor inogona kuita kuti ienderane nezvinodiwa zvakasiyana zvehupenyu hwazvino. Graphene uye kabhoni nanotubes anoshandiswa zvakanyanya mukuita kupedzisa kwemicheka nekuda kwekugadzirwa kwavo kwemagetsi kwakanakisa uye nekugadzira zvinhu..
Nanomatategia anogona zvakare kushandiswa kune moto unodzora, remagetsi kudzivirirwa, infrared kunyudza uye mamwe mabasa. Iyo yakakura mutoro ZnO machira ekotoni akagadziriswa ne-mu ammonia fumigation mushure mekushaya simba oxidation kurapwa ne ling chao.
Nekunetseka kuri kuwedzera kwekugara kwevanhu, micheka-yebasa rimwe haigoni kusangana nezvinodiwa nevanhu, saka ndiyo tsika yakajairika yekukudza yakakwirira-inoshanda uye yakawanda-inoshanda zvigadzirwa. Inoshanda-nano-zvigadzirwa zvakakosha chikamu chemicheka inoshanda kupedzisa. Nekukurumidza kukurumidza kweanotechnology, nano-kupedzisa machira ane akawanda mabasa anozova iwo mamwe makuru maitiro mune ramangwana.
Kuti uwane zvakawanda zvehunyanzvi zvemukati, ndapota tarisa kuchinyorwa "kutsvagiridza kufambira mberi kweanomatadium mune zvemicheka zvinoshanda kupedzisa" mune yechina nyaya yekugadzira machira zuva nezuva mukati 2020.